Caafimaadka Maxaa Ku Cusub? | Hawraar
Caafimaadka Maxaa Ku Cusub?
Dhakhaatiirta caafimaadka iyo khubarada cilmi baadhista ee dalka Faransiiska ayaa markii ugu horaysay taariikhda aadamaha, ruux bukaan ah ku tijaabiyay dhiig sanaaciya oo aan dabiici ahayn.
Sida ay ku warantay jariirad ka soo baxda dalka Maraykanka oo arrimaha caafimaadka gaar ahaan dhiiga ka faaloota oo lagu magacaabo (Blood), cadadkeedi ugu danbeeyay, qof bukaan ah oo ku jira cusbitaalka St. Antoine ee magaalada Paris ayaa lagu shubay dhiig sanaaci ah, waxaanay dhakhaatiirtu tijaabadaa ku darsayaan sida dhiigaa aadamigu sameeyay iyo halbowlayaasha bani’aadmigu iskula shaqaynayaan ama iskula qabsan karaan.
Inkastoo sida jariiradu sheegtay uu ruuxan bukaanka ahii ku tabarucay in tijaabada la galiyo, haddana waxay talaabadani noqotay mid muran wayni ka dhashay, maadama oo aan hore loo arag in qof caadiya tijaabooyinka lagu sameeyo oo marka hore lagu soo tijaabin jiray, xayawaano noolaha ay aad isugu dhow yihiin, sida jiirka oo kale.
Dhakhaatiirta tijaabadan samayanaysa ayaa sheegay in ka hor intaan ninkan bukaanka ah lagu durin dhiiga. Inkastoo dhakhaatiirtani sheegeen in bukaanka lagu tijaabinayo dhiigan cusub ee sanaaciga ahii ku tabarucay, haddana waxa kale oo ay cadeeyeen in baadhitaanka lagu sameeyay jiir oo lagu guulaystay. Dhinaca kale Dr. Luc Douai oo ah madaxa cusbitaalka “St. Antoine” ee magaalada Paris ayaa sheegay marka laga tago sida uu sharci u noqonayo tijaabo toos loogu fuliyo qof nool, haddana ay jiraan caqabado badan oo ka hor yimi intii ay ku jireen tijaabadan.
Sida uu Dhakhtarkaasi sheegay dhiigan sanaaciga ah ayaa markasta u baahanaya in qofka lagu shubayo dhiigiisa oo dhan la baadho oo unugyada dhiigiisu ka kooban yahay iyo waxyaabaha abuurkiisa ee Jiiniska afka qalaad loogu yaqaano la isku dheeli tiro.
Dhiiga Rabaaniga ah ayaan isagu u baahnayn marka laga reebo inuu la nooc noqda ka qofka bukaanka ah, in la baadho ama la wada helo waxyaabaha uu ka samaysan yahay.
Sida jariiradu qortay wali natiijo kama danbays ah lagama soo saarin laakiin kaliya waxa lagu guulaystay in kala badh inta caadiyan qofka bukaanka ah lagu shubo dhiiga dabiiciga ah, lagu duray kan sanaaciga ah, walina uu qofkaas bukaanka ahii caadi yahay. Inkastoo ay jiraan xaalado miyir doorsoon ah oo mararka qaarkood uu galayay hasa yeeshee wali waxa socda tijaabadii iyo sida ay guul ama guul daro ugu dhamaan karto.